Umbukiso Wezithombe WaseBrithani (Ka-January–August 2015) | JW.ORG
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Arabhu (SaseLebanon) Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Igbo Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Oromo Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBhunu IsiCatalan IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFinishi IsiFulentshi IsiGalicia IsiGeorgia IsiGreki IsiHausa IsiHebheru IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLithuania IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiNdebele (SaseZimbabwe) IsiNepali IsiNgabere IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTahiti IsiTajiki IsiTelugu IsiThai IsiTurkey IsiValencia IsiWelsh IsiYoruba IsiZulu
OFakazi BakaJehova bathutha ihhovisi labo legatsha eMill Hill, eLondon, bathuthela endaweni ecishe ibe amakhilometha angu-70 mawuya ngasempumalanga, eduze nedolobha iChelmsford, e-Essex. Phakathi kuka-January no-August 2015, izisebenzi zalungiselela indawo ukuze kuqalwe ukwakha.
January 23, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha
Ngemvu yeziphathimandla zendawo, izisebenzi zisusa izihlahla ezigawuliwe ukuze indawo ivuleke kahle. Baqikelela ukuthi bayawuqeka lo msebenzi ngaphambi kokuba kuqala isikhathi sokuba izinyoni zakhe izindleke. Izinhlayiya zesinkuni zizosetshenziselwa ukwenza izindawo zokuhamba ngezinyawo eziphephile, futhi izingodo zizobekwa ukuze zibuye zisetshenziswe.
January 30, 2015​—Indawo yokudlela yezisebenzi
Osebenza ngogesi ufaka into yokuxhuma ugesi kuma-screen okubuka ama-video endaweni eyayikande isahhotela. Manje isizoshitshwa ibe yikhishi nendlu yokudlela. Ama-screen azosiza izisebenzi zokwakha zikwazi ukubuka izinhlelo ezingokomoya ezinjengokukhulekela kwasekuseni kanye nesifundo somkhaya waseBethel se-Nqabayokulinda.
February 23, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha
Izisebenzi zifaka uthango lokuphepha, maduze oluzovala indawo enkulu yesakhiwo. Njengoba indawo icishe ibe amaphandle, kwenziwa amalungiselelo okugcina izilwane nezitshalo zendawo ziphephile. Ngokwesibonelo, ezansi kothango, kushiywe isikhala esingamasentimitha angu-20 ukuze izimbila zikwazi ukuyofunda ukudla ebusuku.
Kwenziwa umgwaqo wesikhashana osuka endaweni yokuhlala uya endaweni yesakhiwo.
March 5, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha
Ukubukeka kwayo ngasempumalanga, kubonisa umgwaqo wesikhashana usuphelile. Njengoba kubonakala esithombeni phezulu ekhoneni ngasesandleni sokudla, umgwaqo uze ufike esakhiweni esikhulu sokusebenza. Izakhiwo ezingaphandle, ezansi kwesithombeni ngasesandleni sobunxele, sizoshintshwa zibe izindawo zokuhlala zezisebenzi zokwakha. Izindawo zokuhlala zizofakwa kule ndawo evulekile eseduze.
April 20, 2015​—Indawo yokuhlala yezisebenzi
Ilungu leNdikimba Ebusayo yoFakazi BakaJehova nomunye ummeleli wendlunkulu bavakashela iqembu lezisebenzi zokwakha. Kamuva ngalelo sonto, wasakazwa umhlangano okhethekile kuwo wonke amaHholo oMbuso aseBrithani nase-Ireland. Kwamenyezelwa ukuthi ebusukwini obabandulele, uMkhandlu weDolobha laseChelmsford wawukhiphe imvume yokuqala yokuba umsebenzi wokwakha uqhubeke.
May 13, 2015​—Indawo yezisebenzi zokwakha enkulu
Izisebenzi zifaka into ezovikela izimpande phakathi kwezihlahla ezimbili ezindala ze-oki. Indlela eyenziwe ngayo lento izosiza ekuvikeleni izimpande zezihlahla lapho kudlula imithwalo emikhulu, njengoba kuphakathi kwendawo yokuhlala yezisebenzi nalapho zisebenzela khona.
May 21, 2015​—Indawo yokuhlala yezisebenzi
Amalungu eqembu elenza izisekelo agumba imisele ukuze kwakhiwe izindawo zokuhlala zesikhashana. Mawubuka le phambili esithombeni uyazibona izindlu zokuhlala ezingu-50 ezizohlala izisebenzi zokwakha phakathi nalo msebenzi.
June 16, 2015​—Indawo yokuhlala yezisebenzi
Osebenza ngamapayipi amanzi ufaka amapayipi kwenye yezindlu zokuhlala zesikhashana.
Ukubuka ungasempumalanga, okubonisa izindlu zokuhlala ezintsha zesikhashana. Nganeno esithombeni, kusalungiswa izisekelo zezindlu zokuhlala ezengeziwe. Ngakwesobunxele kukhona izakhiwo zangaphandle zendawo yokuhlala yezisebenzi, kuhlanganisa nendlu yokudlela yezisebenzi zokwakha. Igatsha lizokwakhiwa kuyo le ndawo emaphakathi nayo esithombeni.
Uchwepheshe wezokuxhumana uxhuma izintambo ze-fiber-optic endlini yezokuxhumana. Kwadingeka isimizo sama-computer sokuxhumana kanye-Internet ngasekuqaleni nje komsebenzi ukuze kuhlelwe yonke imisebenzi ephathelene nokwakha, kuxhunyanwe namanye amagatsha futhi kusetshenzwe ndawonye ngaphansi kokuqondisa kwendlunkulu yomhlaba wonke.
July 6, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha
Umsebenzi wenkontileka ukala indawo yokumba imisele yokuhlola esebenzisa umshini we-GPS. Imisele izosiza abavubukuli ukuba bakwazi ukuhlola indawo ukuze kuqalwe ikwakhiwa. Nakuba eduze naseChelmsford kwakuhlala amaRoma, emiseleni engi-107 embiwe phakathi nekuhlola kokuqala akutholakalanga lutho olubalulekile oluwubuchwepheshe basendulo.
July 6, 2015​—Isakhiwo esikhulu sabasebenzi
Kunqunywa uhlaka lomnyango ukuze lulungiswe lube ngendlela efanele. Ezinye izindlu esakhiweni sabasebenzi ziyalungiswa ukuze zenziwe amashabhu. Amahhovisi esikhashana nenkonzo zokusiza kuzokwenziwa la nakho.
Kulayishwa inhlabathi elolini lokuthutha izibi ukuze iyogcwalisa kwenye indawo.
July 7, 2015​—Indawo yesakhiwe segatsha
Ukubukeka kwamaphandlea aseBrithani ngaseningizimu yendawo engamahektare angu-34. Kunomgwaqo omkhulu oseduze (ongabonakali esithombeni) owenza kube lula ukuya esikhumulweni semikhumbi, esezindiza nasedolobheni laseLondon.
July 23, 2015​—Indawo yesakhiwo segatsha
Abenkontileka badiliza izakhiwo ebezikhona ukuze kuvuleke indawo yokwakha igatsha elisha.
August 20, 2015​—Isakhiwo esikhulu sabasebenzi
I-crane ethwala amathani angu-60 yehlisa ingxenye yendlu exhunywayo. Nganeno esithombeni, izisekelo zezinye izindlu sezenziwe. Lezi zindlu zizosebenza njengamahhovisi abahlanganisi kulo msebenzi.
Thumelela Thumelela Umbukiso 1 Wezithombe WaseBrithani (Ka-January Kuya Ku-August 2015)